Paortiogaly : mpikatroka ho an’ny zon’olombelona mitolona manohitra ny fanavakavahana, notolorana loka iraisampirenena · Global Voices teny Malagasy
Paortiogaly, vao haingana, nalaza be tamin'ny fampahalalambaovao noho ny fanavakavaham-bolonkoditra
Mpanoratra Global Voices Lusofonia Nandika (en) i Liam Anderson, Abdoulaye Bah, avylavitra
Voadika ny 26 Janoary 2022 14:44 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, русский, Français, Ελληνικά, Português
Mamadou Ba, avy amin'ny OS Racismo – pikantsary YouTube
Tato anatin'ny taona efatra farany dia nihamafy ny fahatongavan-tsaina sy ny adihevitra momba ny fanavakavahana ao Paortiogaly. Raha marobe ireo trangam-panavakavahana mitranga any anatin'ny faribolana pôlitika sy ny fampahalalambaovao, nahazo ny haja mendrika azy ireo kosa nony farany ny sasantsasany tamin'ireo mpikatroka. Tsy ela akory izay i Mamadou Ba, mpikatroka iray fantadaza, monina any Paortiogaly ary nanokana ny androm-piainany hitolomana hanohitra ny fanavakavahana sy ireo kabarim-pankahalàna, no nahazo ny Loka ho an'ny Mpiaro ny Zon'Olombelona Tandindonin-doza, natolotry ny Front Line Defenders.
Io loka io, ary ireo andiana zavabita sy jeritodika any anatin'ireo fifandraisana ara-poko ao Paortiogaly, dia niteraka adihevitra momba ny fifandraisan'ilay firenena amin'ny fanjanahantany sy ireo olan'ny resaka foko amin'izao fotoana izao.
Nazava tsara ny toedraharaha tamin'ny 2009 rehefa, sambany, nisy vehivavy mainty telo voafidy ho ao amin'ny antenimiera paortiogey.
Ireo vehivavy telo voafidy, samy manana fiaviana gineàna daholo, dia ry Beatriz Dias avy amn'ny antoko Bloco de Esquerda, Romualda Fernandes avy amin'ny Partido Socialista sy Joacine Katar Moreira avy amin'ny antoko Livre. Ny governemanta tao Guinée-Bissau dia namaritra ny fahalanian'izy ireo ho « vanimpotoana manan-tantara » ao anatin'ny demaokrasia paortiogey.
Joacine Katar, ilay hany tokana voafidy avy amin'ny antokony, dia sady nisarika fahalinana no niteraka resabe. Taorian'ny nahalany azy, nisy sasantsasany tamin'ny olona niteny hoe tsy tokony handray ny toerany izy ireo satria tsy paortiogey no sady tokony horoahana hiverina any amin'ny tany niaviany.
Iray tamin'ireo feo tena nanakiana azy ilay solombavambahoaka namany, André Ventura, mpitarika ny iray amin'ireo antoko avy amin'ny elatra farany havanana fatra-pifikitra amin'ny nentindrazana ao Paortiogaly. Ho valin'ireo kiana, ny antoko misy an'i Joacine dia nalahelo hoe, raha tokony ho aingam-panahy hiteraka fankalazàna ireo zavatra vitany, ity fifidianana ity dia nitondra ho any amin'ny fanenjehana ny tenany manokana. Indro ny ampahany tamin'ilay fanambaràna:
Manoloana ireo fanafihana manokana tsy mitsahatra sy mpanavakavaka ataon'ireo solombavambahoaka sy mpitarika ny antoko elatra havanana, indrindra fa ny CDS-PP sy ny antoko farany havanana « Chega », ataon'izy ireo amin'i Joacine Katar Moreira, izay hany mpisolo tena ny antoko LIVRE, ity farany dia tsy manao afa-tsy ny mandà amin'ny heriny rehetra ireny fanafihana sy fampiasàna fomba fiteny iray manafintohina sy manala baràka ireny izay vao mainka manamafy ireo hevitra raikitampisaky ny fanavakavaham-bolonkoditra sy noho ny maha-lahy na vavy ao anatin'ny fiarahamonina paortiogey.
Ny fanenjehana ataon'i Ventura ihany koa dia hita ho toy ny tetikady ikendrena ny hanaovana ho tsy ara-drariny ny fisian'ireo olona hafa volon-koditra any anatin'ny tontolo pôlitika, ary handemena ireo pôlitika mampiroborobo ny fitoviana ara-poko sy fiaviana, araka ny itantaran'ny media iray ao an-toerana azy.
Ny 19 May, Katar dia namoaka hafatra iray tao amin'ny pejiny Facebook, ka tao anatin'izany izy no nanipika ny filàna mitolona manohitra ny fanavakavaham-bolonkoditra :
Ny 21 martsa isika dia mankalaza ny Andro Erantany ho fanafoanana ny fanavakavaham-bolonkoditra. Olona 100 no nangatahako hampiasa ny feon-dry zareo sy ny teniny hanehoana hevitra. Ary angatahako ianareo hihaino azy ireo. Miainga amin'ny toeran'ny fihainoana no manomboka ny ady amin'ny fanavakavaham-bolonkoditra. Ny 20 sy 21 martsa, hamoaka karatra 100 eto aho. Misaotra; an'ny rehetra ny ady!
Indrisy anefa, tsy i Katar irery no olon'ny tontolo pôlitika miatrika ny tamberin'ny kibain'ny fanavakavahana. Tamin'ny Aogositra 2020, nisy imailaka tsy nitonona anarana nalefa ho an'ireo solombavambahoaka Mariana Mortágua sy Joacine Katar Moreira nanomezana azy ireo « fetra 48 ora » mba « hametrahany fialàna amin'ny asa pôlitikany ary handaozan-dry zareo ny tanin'i Paortiogaly. » Ny mpanoratra dia nandrahona ny hamely ny mpikambana ao anatin'ny fianakavian-dry zareo raha tsy manaraka izany ry zareo, mba « hiantohana ny fitonian'ny vahoaka paortiogey ».
Tanaty tranga iray mibaribarin'ny resaka fanavakavaham-bolonkoditra, ireo mpankafy fanatanjahantena dia nanototra ny pejy Facebook-n'ilay mpanao fanatanjahantena ao amin'ny klioban'i Lisbonne, Hugo Gil e Benfica, tamina fanehoankevitra mpanavakavaka namely ilay mpitantara tamin'ny fantsona Televisão Pública de Portugal, RTP, taorian'ny nanakianany an'i Gil e Benfica. Taorian'ilay tranga, nanao antso ho hitan'ny daholobe i Gil e Benfica ho an'ireo mpanaraka azy mba hampitsahatra ny fandefasana fanehoankevitra tahaka izany :
Miala tsiny aho, fa momba ity resaka ity, tena laviko tanteraka. Ary ao anatin'io ady io, dia any amin'ny lafy misy an'i Blessing aho, na olona hafa koa, na dia nokianinareo araka ny fomba fijerinareo manokana aza ry zareo.
Sarotra ny handrindra fanehoankevitra maro tahaka izany, ary tsy hoe fialantsiny [fotsiny] io akory. Menatra aho amin'ity toedraharaha ity ary izay rehetra fanehoankevitra [mitovy amin'io] dia hohelohina sy hofafàna. Tsy ambany tahaka izany isika. Manolotra ny fialantsiniko tena avy ao am-poko aho.
PS : Isaorako ireo olona nanaitra ahy ary velon'ahiahy tamin'ilay toedraharaha.
Tsy efa akory izay, ireny raharaha rehetra ireny dia niafara tamin'ny fankatoavana an'i Mamadou Ba izay mpikambana ao amin'ny hetsika SOS Racisme hatramin'ny 1999 no sady mpikambana mpanorina fikambanana marobe, nasiônaly sy eorôpeàna, mpiaro ny zon'ireo mpifindramonina ary ireo olona avakavahana noho ny volon-koditra.
Mamadou dia iray amin'ireo feo tena manamarika ny hetsika fanoherana ny fanavakavaham-bolonkoditra ao Paortiogaly. Izy koa mazàna no atao lasibatra ho an'ireo hetsiky ny elatra farany havanana sy néonazis.
Ohatra, tamin'ny fiandohan'ny 2020, Mamadou Ba dia naharay tao an-tranony taratasy iray niaty fandrahonana ho faty. Tamin'ny Febroary 2021, nisy fanangonana sonia tety anaty tambajotra natomboka mba hanesorana taminy ny maha-olompirenena paortiogey azy sy handroahana azy hiala an'i Paortiogaly. Ary hatramin'ny Jona, in-droa no efa nosomparana nasiana mariky ny Nazi sy ompa miaty fanavakavahana ny foben-toeran'ny SOS Racisme.
Ny faharoa nahazo ny loka avy ao Eorôpa sy Azia Afovoany dia Mamadou Ba avy amin'ny SOS Racismo, #Portugal.
Teraka tao Sénégal ary mpifindramonina, Mamadou dia nanokana ny androm-piainany ho an'ny hetsika fanoherana ny fanavakavaham-bolonkoditra. (tohiny) https://t.co/iGBSb9Ij8N pic.twitter.com/6HE0aWsGpb
Ho fankasitrahana ny ezaka vitany, ny Front Line Defenders dia nanolotra ho an'ilay mpikatroka Mamadou Ba ny “Loka ho an'ireo mpiaro ny zon'olombelona tandindonin-doza”, tao anatin'ny lisitra nahitàna ireo mpikatroka samihafa avy amin'izao tontolo izao.